अब यो आफ्नो साथीहरु संग परिचित हुन समय हो, तर कसरी व्यवहार गर्ने, त्यसैले पहिलो बैठक र थप सञ्चारले केवल सकारात्मक भावनाहरू ल्यायो। सायद तपाईंले इज्जत दिनु पर्छ, किनभने यस तरिका त्यहाँ सबै साथीहरू खुशी गर्ने मौका हो, वा तपाईंलाई दूरी राख्ने आवश्यकता छ?
जीवनको एक महत्त्वपूर्ण भाग
तपाईं धेरै मान्छेहरूको लागि बुझ्न चाहन्छु, साथीहरू केटी भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, खासकर जब तिनीहरू यति लामो भेट्न सक्दैनन्। उहाँसँग, उहाँ मित्रलाई भन्दा अलविदा भन्नु भन्दा सजिलो र सजिलो छ जसको साथ उहाँ बचपन पछि मित्र हुनुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाईं वास्तवमा मानिसलाई मनपर्छ भने, सही व्यवहार छनौट गर्न र साथीहरूको साथ एक साधारण भाषा खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्, किनभने तिनीहरूको राय धेरै धेरै हुनेछ।
के यो तपाईंको प्रेमीको साथीहरु संग इज्जत गर्न सम्भव छ?
यो स्थिति अस्पष्ट छ र यस्तो छेउको परिणाम फरक हुन सक्छ। यदि तपाईं यसलाई ओभरराइड गर्नुभएन भने, सरल छेउले प्रेमीले सही ईर्ष्या गर्न सक्दछ, त्यो छ, उसले हेर्नेछ कि उसले आफ्ना साथीहरूलाई मनपर्छ, जसको अर्थ उसले सही छनोट गर्यो। मूलतया, गम्भीरतापूर्वक यस्तो इज्जतलाई बुझ्न सकिने छैन, त्यसैले तपाईंको प्रेमीको साथ टाढाको र राम्रो इज्जत प्राप्त नगर्नुहोस्। तर अर्कोतर्फ, यो व्यवहारले पूर्ण प्रतिक्रियाको कारण हुन सक्छ। प्यारीले सोचेका छन् कि यदि तपाईं आफ्नो आँखामा आफ्ना साथीहरूसँग इशारा गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसोभए तपाइँ के अनुपस्थितिको समयमा के गर्नुहुन्छ र के यो सामान्यतया छेउमा राख्नु हुन्छ? यसैले, यो राम्रो तरिकाले तपाइँको कोइरीट्री एकै ठाउँमा राख्नु राम्रो छ र छेड़छाड बिना आफ्नो साथीहरु संग संचार को निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मानिसको साथीले तपाईंलाई आदर गर्नु र सराहना गर्नुपर्छ, र कानसँग प्रेममा हुनुपर्दैन।
तिमीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ?
व्यवहारको सही योजना छान्नु आवश्यक छ, त्यसैले तपाईंको प्रिय तपाइँलाई गर्व छ र उहाँका निर्णयको सत्यताको कुरा हो।
दूरी राख्नुहोस् । जान्नको पहिलो मिनेटबाट धेरै केटीहरू "बोर्डमा आफ्नै आफैं" हुनका लागि केटाको कम्पनीमा सबै काम गर्ने प्रयास गर्दैछन्। बाहिरबाट यो अजीब र हास्यास्पद देखिन्छ, र तपाईं पूर्णतया विपरीत नतिजा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
कसैसँग विवाद नगर्नुहोस् । धेरै कारणहरुका लागि केहि कारणहरु निश्चित छन् कि कुनै पनि संघर्षमा उनीहरूले आफ्ना साथीहरू भाग लिनेछन्, उनी निस्किन्छन्, उनीहरूको पक्षमा लिन्छन्। तर यो सबभन्दा राम्रो भाग्य परीक्षण गर्न र कुनैसँग कुनै पंक्ति बनाउँदैन, किनकी तपाईंको कार्य मित्र बनाउन र झन् झन् झन् झनै हो।
आफै हुनुहोस् । जनतामा कुनै पनि गेम सधैं सचेत छ र चाँडै वा पछि तपाईं नकली हुनमा शंकास्पद हुनेछ। यसकारण, आफैलाई बसोबास गर्नुहोस्, केवल यस तरिकामा, तपाईं निष्कपट हुन सक्नुहुन्छ र तपाईंका सबै सकारात्मक पक्षहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यो कम्पनी मनपराउनुहुन्न भने, त्यसपछि यो सर्वोत्तम र धार्मिक रूपमा छोड्ने सबै भन्दा राम्रो छ, र सबैलाई बताउनुहोस् कि तिनीहरू साँच्चै छन् र तपाईं उनीहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ। यदि तपाईं सबैलाई मनपर्दैन भने यो मित्रहरूसँग कुराकानी गर्न आवश्यक छैन, तर कारण उद्देश्य हुनुपर्छ।
आफ्ना साथीहरूको ईर्ष्या नगर्नुहोस् । यदि तपाईं आफ्नो साथीहरु संग कम्पनी मा टहलने को लागि जान्छ, तब ध्यान राख्नुहोस कि त्यो सबै समय तपाईं संग खर्च गर्न बाध्य छैन। निस्सन्देह, उसले तपाईलाई पछि लागेका तथ्यलाई ध्यान दिनेछ, तर तिनी "पट्टा" मा हुनु पर्दैन। यसैले, तपाईंको ईर्ष्या पूर्णतया अनुपयुक्त हुनेछ र प्रायः सम्भवतः एक स्क्यान्डलको नेतृत्व लिन्छ, र मजाक सचेतक छैन।
पहिलो प्रभाव । सम्झनुहोस्, तपाईं आफैलाई देखाउन दोस्रो मौका छैन, त्यसैले तपाईंको "fi" धेरै जोरले कहिल्यै व्यक्त नगर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, तपाईं जुन ठाउँमा जानुभएको ठाउँ मनपर्दैन वा संगीतका साथीहरू सुन्न चाहानुहुन्छ। तपाईं केवल केहि मिनेट को लागि स्पॉटलाइट मा हुनेछ, त्यसपछि सबै सामान्यतया मामलाहरुमा निलम्बित गरिनेछ, र तपाईं मा फिट छ, वा तपाईं छैन।
बैठक पछि छनौट गरिएको व्यक्तिका मित्रहरूले बुझ्नु पर्छ कि तपाइँ आफ्नो कम्पनीलाई कुनै पनि तरिकामा तोक्न सक्नुहुन्न र सञ्चारलाई बिर्सनु हुँदैन। तपाईं यस "hangout" को पोषण हुनु पर्छ। निस्सन्देह, यो पहिलो पटक काम गर्दैन, तर लक्ष्य पूरा गर्न पहिलो चरण सकियो।
पुरुषहरू किन वृद्धहरूलाई माया गर्छन्?
अज्ञात तहबाट अनुहारको अभ्यास गर्दछ
पिकुनिया बिरुवालाई कसरी छनौट गर्ने?
लेवारा - ल्यान्डिङ र हेरविचार
उनको आँखा बच्चा संग फ्लाइए - मैले के गर्नु पर्छ?
सानो कोठामा बस्ने कोठाको घर - प्रत्येक वर्ग मीटर कसरी तर्कसंगत प्रयोग गर्ने?
महिला डेमी सीजन जूता
भान्सा सिंक - कसले छनौट गर्ने?
पतलूनलाई के गर्ने?
बिल्ली खाना ट्रेनर
टमाटर कोरियन - मूल savory नाश्ता को सबै स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु
गोलाकार हटाउन पछि कसरी खाना खान्छ?
मार्कर - यो के हो, बजारको काम के हो?
केटीहरुको लागि हेलिकप्टर